Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 16
Mino ny astrolojia ve ianao? Raha eny, ohatrinona ny heverina ho mifandray amin'ny fiainan'ny olona sy ny tombontsoany?
Raha astrôlôjia dia ny siansa no siansa. Araka ny teny lazaina dia ny fanandroana no siansa ny kintana. Mino izahay fa ny sôlôjia dia iray amin'ireo siansa lehibe indrindra, saingy mino koa isika fa ny ankabeazan'ny olona miresaka momba ny fanandroana, izay mamoaka horoscope na maminany mialoha ny fisehoan-javatra ho avy, dia mahafantatra bebe kokoa noho ny tsy faritan'ny sasany amin'ireo lafiny ara-batana ny fanandroana. . Mino izahay fa betsaka amin'ny astrolojia ary tena kely amin'ny mpanandro fantatra. Ny mpanandro dia iray izay mahafantatra ny lalàna mifehy ny vatana amin'ny habakabaka, amin'ny asa anatiny sy ivelany, ny fitaomana avy amin'ny vatana sy ny fiantraikany, ary ny lalàna izay mifehy sy mifehy ireo fitaomana ireo amin'ny mifandraika amin'ny tsirairay sy ny fihetsik'izy ireo amin'ny olona.
Ny mpanandro iray no mahalala izany rehetra izany, fa ny mpanandro kosa tsy mba miresaka ny zavatra fantany. Fantany fa tsy afaka mijanona ho mpanandro sy mitantara ny zava-nitranga izy na teo aloha ary manombantombana ny fisehoan-javatra ho avy, ary, ho an'ny serivisy dia mahazo vola. Ny mpanandro iray, raha ny tena hevitry ny teny, dia tsy maintsy nanitatra ny zavatry ny an'izao tontolo izao ary niakatra ambonin'izao tontolo izao mba ho lasa mahalala ny kintana sy izay rehetra tiana holazaina amin'ny "kintana." Fa mino izahay fa tsy tena fantatra ny kintana, na dia ireo mpanaraka ny siansa tena mitovy amin'ny astronomia aza. Ny astronomia dia miresaka momba ny fihetsika, halehibeazana, halavirana ary ny lalàm-panorenana vatana amin'ny lanitra. Ny fanandroana dia ny siansa goavambe na zava-miafina momba ny astronomia. Mino izahay fa ireo teboka kely momba ny fahamendrehana izay antsointsika hoe lanitra dia midika ho zavatra lehibe kokoa ho anay noho izay nolazain'ny astronomia na mpanandro azy.
Ny kintana dia mifandraika amin'ny ain'ny olombelona sy ny tombotsoany hatreto raha afaka mankasitraka sy mahatakatra azy ireo isika. Hazon'izy ireo foana ny fahalianan'ny sain'olombelona.
Nahoana no misy fiantraikany amin'ny hoavin'ny ego noho io fahaterahana io ny fotoana hahaterahana ao amin'ny tontolon'ny zavaboary?
Ny “fotoana” nahaterahana dia zava-dehibe amin'ny hoavin'ny ego satria amin'io fotoana io dia amin'ny toe-javatra faran'izay henjana indrindra, ary ny fihetseham-po rehetra voaray dia hisy fiantraikany maharitra. Ny azo atao avy eo dia tsy azo esorina tsara. Ny hery mitarika eo amin'ny fotoana nahaterahany dia tsy maintsy misy fiantraikany miavaka amin'ny fiainana ho avy satria noho ny fiomanana mialoha ny fitarihana dia hisy fiantraikany amin'ny vatana saro-pady. Alohan'ny ahatongany amin'izao tontolo izao, ny vatana dia miankina amin'ny fivelomany amin'ny fiainana ara-batan'ny ray aman-dreniny. Izy io dia mipetraka amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny proxy ihany. Miaina ao anatin'ny tontolo iray ara-batana. Mbola tsy namofom-bony ihany, izay no fiandohan'ny fiainam-pifandraisana tsy miankina. Mandritra ny fotoana nahaterahany, tafasaraka amin'ny ray aman-dreniny ny vatana ary tsy mifofofofoina amin'ny prokla intsony, fa manery ny fofony avy amin'ny filan'ny ray aman-dreny. Ny vatany dia tsy voamboarina na miaro amin'ny tontolo ivelany sy ny herin'ny renin-dreniny; Izy io dia mitoetra eo amin'izao tontolo izao amin'ny vatany, tsy misy fiarovana sy fonosana hafa. Koa ny fiantraikany rehetra izay manan-kery mandritra izany fotoana izany dia mampiavaka ny tenany amin'ny vatana astral vao teraka, izay tahaka ny sarimihetsika na takelaka madio, vonona handray ireo fihetseham-po sy fitaomana rehetra izay entina ao amin'ny fiainana, na dia eo amin'ny vatana ara-batana aza. mitondra marika na marika arak'andoha. Noho izany antony izany dia manan-danja ny fotoana nahaterahana ary hisy fiantraikany eo aorian'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao.
Ahoana no mamaritra ny hoavin'ny olona iray amin'izao fotoana izao?
Fa ny fotoana nahaterahany an'izao tontolo izao dia mety hamaritra ny anjarantsika izay inoantsika, fa ny fanapahana azy no tadiaviny hatrany. Ny laharam-pahamehana dia voafaritry ny fiterahana ihany rehefa misy olona vonona ny hiaina mifanaraka amin'ny tsimokaretina azo tamin'ny fotoana nahaterahany. Mandritra ny fotoana nahaterahany dia toy ny takelaka sary mirakitra fatratra ny vatan'ny zaza. Vetivety foana dia miseho eo amin'ny tontolo ara-batana ny fitaoman-kery lehibe eo aminy. Ny fofon'aina voalohany amin'ny zazakely dia mirakitra ny fitarihana sy ny fahatsapana an-java-mihetsiketsika tsara amin'ny vatana, ary ireo fahatsapana ireo dia nohamafisina tao amin'ny vatan'ny zazakely vao teraka dia mitovy amin'ny fomba noraisina sy tazomina amin'ny takelaka sary. Ny fiainana araka ny anjarany dia araka izany ny manaraka ny soso-kevitra voatondro sy hiaina araka ny fahatsapana voaray tamin'ny fotoana nahaterahany. Ireo fahatsapana ireo dia namboarina niaraka tamin'ny fampandrosoana ny vatana sy ny fampiasana ny saina. Ireo fihetseham-po ireo dia mijanona ao ambadika sy mametraka ny sary ao an-tsaina ary ny saina dia manana ny anjara napetrany amin'ireto sary ireto. Izy io, ny saina, dia mety mihetsika araka ny tsindry sy ny soso-kevitra avy amin'ny fahatsapana na mety mamorona lalana izay tsy mitovy amin'ireo fihetseham-po voarainy. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny saina na ny ego, raha toa ka matanjaka sy finiavana hanao asa an'izao tontolo izao ankoatry ny zavatra naroson'ireo fitaoman-jaza.
Ahoana ny fiantraikany eo amin'ny fahaterahana, na ny anjaran'olona, ​​miaraka amin'ny karma amin'ny ety?
Karma no vokatry ny nieritreretan'ny olona azy sy nataony; izay noeritreretin'ny olona iray sy nataony dia ny tanjony, fa ny hetsika sy ny lahatra dia mihatra amin'ny fe-potoana iray fotsiny. Ny vanim-potoana voalaza eto dia androm-piainana. Ny laharam-pahamehana, noho izany mandritra ny vanim-potoana, dia karma iray mandritra ny vanim-potoana; vanim-potoana io dia ny fiainan'ny vatana izay teraka ho amin'izao tontolo izao. Ny eritreritra sy ny fihetsiky ny olona iray amin'ny fiainana iray dia mitarika ny fiainana ho amin'ny fiainana manaraka; ny hery mitarika eo amin'ny fiterahana dia fambara ny amin'izay nataony taloha sy izay mety hantenainy ankehitriny. Ny fotoana nahaterahana, noho izany dia tsy maintsy hifandrindra sy hiara-miasa amin'ny karma amin'izany fiainana izany, satria karma, na vokatry ny hetsika.
Moa ve ny fitaomana ny planeta ho an'ny karma, na ny fiafarany? Raha izany, aiza ny fidirana malalaka?
Eny, ny fitaomana ny planeta sy ny fitaomana hafa rehetra dia ampiasaina amin'ny fanatanterahana sy famaritana fika. Fa ny faran'ny olombelona no nomeny ny tenany. Inona no hiafarany ankehitriny, ka mety tsy ekena; na izany aza dia efa nanome sy tokony hanaiky izany izy. Azo atao ny milaza fa ny olona dia tsy hanome zavatra izay tsy tiany ary, koa noho izany dia tsy hanome ny zavatra notadiaviny izy. Tsy ho ela ny fanoherana toy izany. Ny zavatra nofidin'ny olona ho an'ny tenany na ny hafa dia tsy maintsy miankina amin'ny fahaizany misafidy sy ny fitaovana omeny. Ny tovolahy iray tsy mahalala izay manana fomba betsaka, na lehilahy antitra izay tsy dia misy dikany, no hifidy sy hanome azy ireo samy hafa, araka ny fahalalany sy ny heviny. Izay nofidina sy napetrany ho zazalahy ho azy dia mety tsy ho voamariky ny taona aty aoriana, satria ny tovolahy dia nitombo tamin'ny fahalalana sy ny fankasitrahany ny zavatra, ary ny kilalao zazakely na trinket dia mahazo fiheverana kely fotsiny. Ny olona iray izay nampiasa fitsarana kely tamin'ny fanaovana fifanekena, na izany aza, dia mifamatotra amin'ny fifanekena nataony, na dia betsaka aza ny nenina dia mety amin'ny fianarana ny toetran'ny fifanarahana. Mety hanao fihetsiketsehana izy, fa ny hetsika kosa tsy hanafaka azy amin'ny adidy. .
Na amin'ny ankehitriny na amin'ny fiainana taloha dia nisy ny fifanarahana amin'ny antsoiny hoe hiafarany. Izy io no karma na ny fifanekena nataony. Izany dia marina. Ny tsy andoavam-bola ny iray dia miankina amin'ny hoe inona no tadiaviny hatao, na ela te hahazo, fa izay nanapahany no hataony. Ny olona tsy mivadika dia tsy mandany ny heriny amin'ny famolavolana fifanarahana iray na hanamaivana ny andraikiny. Ny lehilahy tsy mivadika dia mamelona ny tenany amin'ny fomba hamenoana ny fifanekeny ary hanatontosa ny andraikiny. Mandritra izany fotoana izany, raha ny alàlan'ny fifanekena na ny andraikitra no jerena ho tsy mendrika dia tsy hanao fifanekena hafa izy, ary tsy voatery hitaky andraikitra. Ny fifanarahana sy ny andraikitra toy izany dia ny fiafarana na ny karma, izay nataon'ny tsirairay ho azy.
Ny fahalalahany dia ho avy rehefa hanapa-kevitra ny fomba hiatrehana ny hiafarany na ny karma. Hiezaka handositra azy ve izy sa hiatrika sy hiasa ao? Ity no safidiny malalaka. Raha manao safidy amin'ny alàlan'ny safidiny izy, dia hamantatra ny ho avy ho avy izy ary tsy maintsy hifanaraka amin'izany satria voafatotra amin'izao fotoana izao izy.